Global Voices teny Malagasy » Ny hatsaran-tarehy manjavozavon’ireo tendrombohitra manga ao Jamaika, azo sary · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 09 Marsa 2021 11:53 GMT 1	 · Mpanoratra Emma Lewis Nandika avylavitra
Sokajy: Karaiba, Jamaika, Mediam-bahoaka, Saripika, Tontolo_iainana, Zavakanto & Kolontsaina
Ho fankalazana ny faha-28 taonan'ny Valanjavaboary Nasiônalin'ireo Tendrombohitra Manga sy Havoanan'i John Crow, nampanao fifaninanana maka sary ny “Jamaica Conservation and Development Trust” (Tahirimbola Jamaikàna ho an'ny Fikajiana sy Fampandrosoana). Sary fanomezan'ny JCDT, nahazoana alàlana ny fampiasàna azy.
Ho an'ireo mpitsidika ireo Tendrombohitra Manga malaza ao Jamaika , isaky ny mihodina, dia toy ny misy hatrany toerana tsara fitahiry an-tsary. Ilay tendrombohitra mikintaontaona, rakotra ala no mibahan-toerana ery amin'ny fara-vodilanitr'i Kingwton renivohitra, miendrika tampon-kavoana manaraka ny halavan'ny tapany afovoany sy atsinanana amin'ilay nosy. Hita amin'io tandavan-ntendrombohitra io ny tendro avo indrindra ao Jamaika, Ny Tampon'ny Tendrombohitra Manga  (2.256 metatra, manodidina ny 7402 feet).
Tamin'ny 1993 no nahazo hosotra ilay Valanjavaboary Nasiônalin'ireo Tendrombohitra Manga sy Havoanan'i John Crow , ary taona roa taorian'ny nanaovan'ny Jamaica Conservation and Development Trust  (JCDT) — fikambanana tsy mikatsaka tombontsoa ara-bola izay mitantana ilay faritra — ny fanakalozana trosa voalohany indrindra ho takalon'ny fepetra fiarovana ny tontolo iainana tany amin'ny faritra Karaiba miteny anglisy niaraka tamin'ny fanampian'ny USAID, Conservation Trust of Puerto Rico ary ny Nature Conservancy.
Tamin'ny 2015, nosoratana  ho isan'ireo Toerana Lova Erantany ao amin'ny UNESCO ny Valanjavaboary Nasiônalin'ireo Tendrombohitra Manga sy Havoanan'i John Crow, hetsika iray noraisina ho toy ny fanekena ny lanjan'ireo lova voajanahary sy ara-kolontsaina ao aminy.
Amin'ity taona ity, manamarika ny faha-28 taonany ilay Valanjavaboary, nanapaka hevitra ny JCDT hampanao fifaninanana maka sary mba ho tsangambato fankalazàna, ka tamin'ny 28 Febroary no nambarany ny anaran'ireo nandresy. Isan'ny hita tao anatin'ireo mpitsara i Donnette Zacca , mpanorina ny Jamaica Photographic Society sy ilay mpakasary Gary Langley, izay monina any Angletera.
86 no isan'ireo fampidirana nifaninana ary nitsinjara tanaty sokajy telo: Tanora, Natiora ary Kolontsaina. Ny tena tanjona, hoy ny Tale Mpanatanteraky ny JCDT, Dr. Susan Otuokon , dia ny hamorona boky kanto (azo avadivadika eo ampisotroana kafe) anangonana ny sasantsasany amin'ireo sary tsara indrindra nandritra ilay fifaninanana.
Ny sary nopihan'i Kabrina Hylton nahazo ny toerana voalohany tamin'ny sokajy Tanora tamin'ilay fifaninanana nampanaovin'ny Jamaica Conservation and Development Trust‘ ho fankalazana ny faha-28 taonan'ny Valanjavaboary Nasiônalin'ireo Tendrombohitra Manga sy Havoanan'i John Crow. Sary natolotry ny JCDT, nahazoana alàlana ny fampiasàna azy.
Raha ho any amin'ny Tampon'ny Tendrombohitra Manga, làlantany mirefy 11 km eo ho eo no tsy maintsy iaretanao. Arakaraky ny hidinanao dia mipoitra tazana tsikelikely ity indray mijery mahavalalanina sy toy ny kristaly ity. Hoy ilay maniry ho lasa mpakasary, Kabrina Hylton, “Raha iny izaho handeha hiala iny no hitako nipoitra teny anelanelan'ny hazo io.” Tsy vitany ny tsy haka sary; io no nahazoany ny toerana voalohany tao amin'ny sokajy Tanora.
Ity sary ity no nahazoan'i Jade Moyston ny toerana faharoa tao amin'ny sokajy Tanora. Sary natolotry ny JCDT, nahazoana alàlana ny fampiasàna azy.
Ny sary nopihan'i Jade Moyston, izay mampiseho ny iray amin'ireo sakelidrano marobe mikoriana avy amin'ireo tendrombohitra, no nahazo ny toerana faharoa tamin'ny sokajy Tanora. Ho an'ireo mpitsara dia “mamelombelom-bolo sy mahafinaritra” ilay nampidiriny. Asehon'izy io ihany koa ny fahaizamanaon'ny mpakasary amin'ny fampiasàna ny hafainganan'ny ‘obturation’ alefa miadana mba hahazoana ny endriky ny rano mikoriana.
Asehon'ilay sary ny sakelidrano iray mahafinaritra mikoriana midina avy any amin'ireo havoana ao amin'ny Tendrombohitra Manga sy Havoanan'i John Crow, eny an-dàlany hamonjy ireo lohasaha ery ambany. Noho ny fisiany dia misitraka rano madio tsy tapaka ireo mponina eo amin'ny vohitra manodidina.
Ho an'izao tontolo izao dia fialofana manandanja ho an'ny fifangaroanà zava-mananaina maro ilay ala mikitroka be zavona  ao Jamaika. Mihoatra ny antsasany amin'ireo hazo mamelana ao amin'ilay valan-javaboary no tsy hita afa-tsy ao Jamaika, ary ampahatelony amin'ilay valan-javaboarim-pirenena mihitsy. Marobe tamin'ireo niditra nifaninana àry no nahitàna taratra an'io velarantany manjavozavo io, miaraka amin'ireo ampanga, lichens, bromeliads ary volonkazo mihantona eny amin'ireo hazo.
Xavier Allen naka sary ny tendro mihorona tsara dia tsara teo amin'ny ampanga tanora iray vao hisokatra, nahazo ny toerana fahatelo tamin'ny sokajy Tanora. Sary natolotry ny JCDT, nahazoana alàlana ny fampiasàna azy.
Saripikan'i Sherard Little nandresy tao amin'ny sokajy Voary (Natiora), nomena ny lohateny hoe “Fahanginana.” Sary natolotry ny JCDT, nahazoana alàlana ny fampiasàna azy.
Ny Zaridaina Bôtanika Cinchona , manirery sy manan-tantara, noforonina tamin'ny 1868, no lohahevitra nomena ny toerana voalohany tao amin'ny sokajy Voary, sary nopihan'i Sherard Little. Nomena lohateny hoe “Fahanginana,” mampita endrika isankarazany ananan'ilay tendrombohitra, anatin'ny indray mipika monja: ireo havoana ao aminy, ny karazam-piainana tokamiavaka ao anatin'ilay tontolo tsy mahazatra misy ireo hazo sy zavamaniry manodidina, ny tantarany lavabe sy ny fiarahan'ny olombelona miaina amin'ny voary, samy avy amin'ny fijerin'ny indostria (sompitra) ary ny fitsirihana anaty (ilay latabatra be fiasàna).
Ity sarin'ny Oatley Mountain Trail ity, nopihan'i Reichel Neil, no nahazo ny toerana faharoa tao amin'ny sokajy Voary. Sary natolotry ny JCDT, nahazoana alàlana ny fampiasàna azy.
Ny sary manintona maso nopihan'i Reichel Neil ary ahitàna ny Oatley Mountain Trail, izay nahazo ny toerana faharoa tamin'ny sokajy Voary tamin'ilay fifaninanana, dia nofaritan'ilay mpitsara, Donnette Zacca, ho toy ny “mampitaintaina sy misy tsirony”.
Sarinà hazo nopihan'i B’Andra Haughton-Walters nahazo ny toerana fahatelo avy amin'ireo mpitsara ny fifaninanana Jamaica Conservation and Development Trust. Sary natolotry ny JCDT, nahazoana alàlana ny fampiasàna azy.
Nolazain'i B’Andra Haughton-Walters fa ilay sary mampanonofy nopihany, ahitàna ireo hazo ao anaty zavona, dia “fifangarihana mazava amin'ilay tanàna ery ambany.”
Ity saripika tony dia tony ity no nahazo ny toerana voalohany tamin'ny sokajy Kolontsaina, nopihan'i Melanie Taylor. Sary natolotry ny JCDT, nahazoana alàlana ny fampiasàna azy.
Ny saripika tony dia tony, ary azo ambara hoe saro-pantarina, nopihan'i Melanie Taylor, nomeny lohateny hoe “Fantaro ny aminao, tsapao hatraiza no fetra, mahefà izay atao,” no nahasarika ny sain'ireo mpitsara ary nahazo ny toerana voalohany tao amin'ny sokajy Kolontsaina.
Pikasarin'i Sherard Little, ahitana tantsaha iray sy ny borikiny, no nahazo ny toerana faharoa tamin'ny sokajy Kolontsaina. Sary natolotry ny JCDT, nahazoana alàlana ny fampiasàna azy.
Tamin'ny segondra farany no tonga tao anatin'ny sokajy Kolontsaina ilay saripika avy amin'i Sherard Little misy tantsaha iray manao dingan-dava miaraka amin'ny borikiny, izay hitan'ireo mpitsara ny endriny “tsy resin'ny fotoana”.
Ara-tantara, ny Valanjavaboary Nasiônalin'ireo Tendrombohitra Manga sy Havoanan'i John Crow dia toeram-pialofana ho an'ireo andevo Maroons avy ao amin'ny Nosin-dRivotra (Windward Maroons)  izay nandositra ny fanandevozana azy. Araka izany, ilay faritra dia mitahiry lova ara-kolontsaina mifandray mandrakariva amin'io tantaran-dry zareo io, isan'izany ireo lalankely, ireo toerana arkeôlôjika ary ireo vohitra samihafa. Taonjato maro aty aoriana, mbola feno tanjaka ny kolontsaina Maroon.
Sarin'amponga iray asandratra ao anatin'ny sokajy Kolontsaina, sary nopihan'i Peter-Ann Higgins, nahazo ny toerana fahatelo. Sary natolotry ny JCDT, nahazoana alàlana ny fampiasàna azy.
Ao anatin'ity saripika nahazo ny toerana fahatelo ity, an'i Peter-Ann Higgins, nalaina nandritra ny fiaretantory naharitra telo andro  ho fanomezana voninahitra an'ilay mpitarika nankamamiana, Charlestown Maroons, Kôlônely Frank Lumsden, dia gumbe  iray na amponga tapaka iray no nasandratra nandritra ilay lanonana.
Fikosehana kafe sady kodiarana ahodin-drano, an'i Sherard Little. Sary natolotry ny JCDT, nahazoana alàlana ny fampiasàna azy.
Sary sepia avy amin'i Sherard Little ahitàna fikosehana kafe efa tranainy be ary kodiarana ahodin-drano ao Clydesdale, mitory toetoetra sy finamànana akaiky.
Ny saripika an'i Marie Baillie misy tranonkely miorina eo amin'ny tehezan-kavoana iray no nahazo ny toerana fahatelo tamin'ny sokajy Voary. Sary natolotry ny JCDT, nahazoana alàlana ny fampiasàna azy.
Voatahiry ao anatin'ny saripikan'i Marie Baillie ny fiarahamiainan'ny olombelona sy ny voary, porofo, hoy ilay mpakasary, fa “azo atao ny miaina” ao amin'ireo Tendrombohitra Manga, fiainana mirindra miaraka amin'ny voary.
Marobe tamin'ireo saripika nalefa hifaninana no nahatsirihana fa manome fahatsapana filaminana sy fitoniana ireo Tendrombohitra Manga. Namporisihan'ny mpitsara, Donnette Zacca, ireo mpakasary mba hanohy hiezaka haka sary ny toepiainana tokamiavaka ao amin'io faritra io, sy ny “fahalemana mamaritra ilay hazavana boribory sy ny hatsaran-tarehin'ireo tendrombohitra,” tamin'ny filazana hoe, “Miangavy aho, aoka ny tsiaronareo hitahiry ity toerana mahafinaritra ity ho velona mandrakariva.”
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2021/03/09/151699/
 Tendrombohitra Manga malaza ao Jamaika: https://www.jcdt.org.jm/blue-john-crow-mountains/bjcmnp-overview
 Ny Tampon'ny Tendrombohitra Manga: https://www.alltrails.com/trail/jamaica/saint-thomas/blue-mountain-peak--2
 Valanjavaboary Nasiônalin'ireo Tendrombohitra Manga sy Havoanan'i John Crow: https://www.facebook.com/BlueMountainsJamaica/
 Jamaica Conservation and Development Trust: https://www.jcdt.org.jm/
 Donnette Zacca: https://www.antillean.org/donnette-zacca-first-lady-of-photography-876/
 Dr. Susan Otuokon: https://petchary.wordpress.com/2015/10/25/honoring-a-caribbean-conservationist-and-scholar-dr-susan-otuokon/
 ala mikitroka be zavona: https://www.facebook.com/JISVoice/photos/one-unique-feature-of-the/10156440486906457/
 Zaridaina Bôtanika Cinchona: http://www.jnht.com/site_cinchona_botanical_garden.php
 andevo Maroons avy ao amin'ny Nosin-dRivotra (Windward Maroons): https://www.jcdt.org.jm/blue-john-crow-mountains/cultural-heritage
 fiaretantory naharitra telo andro: http://jamaica-gleaner.com/article/news/20150827/three-day-celebration-life-colonel-lumsden